Ciraaq oo 'la siiyay diyaarado dagaal' - BBC News Somali
Ciraaq oo 'la siiyay diyaarado dagaal'
Image caption Taangiyada dowladda Ciraaq oo ka qeybgalaya dagaalka
Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in la soo gaarsiiyay diyaarado dagaal oo ay ka dalbatay dalka Ruushka si ay ugula dagaallanto Sunniyiinta kacdoonka wada, ee qabsaday qeybo badan oo ka mid ah dalkaasi.
Wasiirka difaaca ee dalka Ciraaq ayaa sheegay in la soo gaarsiiyey Shan diyaaradood oo loogu talagalay duqeynta goobaha dagaalka , wuxuuna intaa ku daray in kuwa kale oo badan lasoo gaarsiin doono.
Dhanka kale Baadari ku sugan magaalada Irbil ee waqooyiga dalka Ciraaq ayaa sheegaya in kumannaan qof oo Masiixiyiin ah ay ka qexeen deegaanada ku dhow magaalada Mosul dhowrkii maallin ee la soo dhaafay.
Baadariga ayaa BBC-da u sheegay in kooxda Daacish iyo dagaal yahaniinta sunniyiinta ah ay weerareen laba deegaan oo si aad ah ay u deganaayeen dadka Karistaan ka ah oo lagu kala magacaabo Karakosh and Karamlaish, mid ka mid ah magaalooyinkaasi wxaa difaacay dagaal yahaniinta Kurdiyiinta.
Dadka barakacay dhammaan waxa ay galeen gobolka Kurdistan ee dalka Ciraq.
Monsignor Nazir Semaan oo ka mid ah wadaadada masiixiyiinta ee deegaanka Karakosh balse hadda ku sugan magaalada London, ayaa sheegay in loo baahan yahay dadaal wada jir ah si looga hortago xaaladda hadda tagan.
Haweeney ka mid ah shaqaalaha Save the Children, Caroline Anning oo ku sugan xero ku taalla Ceynakaawa ayaa sheegtay in hay'adda ay sameyneyso wax kastoo ay awoodaan, laakiin xaaladda ay aad u adagtahay.
Image caption Gawaarida dagaalka ee dowladda Ciraaq oo kusii socda dhanka Tikrit
Xili sii horeysayna ciidamada dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in ay dib u qabsadeen magaalada waqooyiga ku taalla ee Tikrit oo ay haysteen kooxaha sunniyiinta ee kacdoonka wada, kuwaas oo magaalada qabsaday laba isbuuc ka hor.
Warbaahinta dowladda Ciraaq ayaa sheegtay ciidamada oo taageerayo taangiyo iyo Elikabtaro inay xididada u siibayaan kooxda Daacish ayna ka dileen in kabadan 60 dagaal yahan.
Mucaaradka ayaa sheegtay in dagaalka uu weli ka socdo Tikrit, waxayna beeniyeen in laga adkaaday.